I-Ulaanbaatar, Mongolia - World Tourism Portal
Yini ukubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili eziphezulu e-Ulaanbaatar
Bukela ividiyo nge-Ulaanbaatar
I-Ulaanbaatar (Улаанбаатар), eyaziwa nangokuthi i-Ulan Bator noma nje i-UB, inhloko-dolobha ye Mongolia. Njengoba kunabantu abacishe babe yizigidi eziyi-1.3, idolobha elikhulu kunayo yonke eMongolia, imi njengezepolitiki yayo, ezohwebo, yezimboni namasiko. Okwenza uhambo lwebhizinisi nobumnandi ngokufana, uzithola uza okungenani edolobheni. Ukwazi nokuhlola idolobha kahle kungakusiza uqonde umlando wezwe nabantu balo obumangalisayo. Umuntu uvame ukubona okwedlule kanti okwamanje kusahlala ndawonye.
Idolobha lihlukaniswe ngokusemthethweni izifunda eziyi-9 nezingu-7 zazo ezitholakala endaweni yasedolobheni noma ezungezile. INalaikh neBaganuur yizifunda ezimbili ezinengqalasizinda yazo yedolobha etholakala endaweni engaba amakhilomitha angama-138 edolobheni. Womabili la madolobha asendaweni empumalanga ye-UB futhi ekuqaleni ayakhiwa njengamadolobha ezimayini. Kunoma yiluphi uhambo olusempumalanga, izihambi zizithola zihamba phakathi kwale mizi. Edolobheni elikhulu, izifunda ezine zokuqala yiSukhbaatar, iSongino Khairkhan, iBayanzurkh neBayangol lapho kuhlala khona iningi labantu bedolobha namuhla. Izindawo eziningi ezisedolobheni zitholakala esifundeni saseSukhbaatar.
Emlandweni wabantu baseMongolia, kuye kwaba nemizi eminingana eyaziwayo eyakhiwe njengamadolobha amakhulu njenge Kharakhorum phakathi nekhulu le-13 uMbuso WaseMongolia Omkhulu. Kodwa akekho noyedwa kubo owasinda njengedolobha elisebenzayo kwaze kwaba ngekhulu le-16. Ngokuqaliswa okusebenzayo kobuLamaism eMongolia kusuka ngekhulu le-16, izikhungo ezihlala njalo zezimali zaqala ukuvela lapho ubuBuddha baseTibet bukhula. Okubaluleke kakhulu kulezi zindawo kwakuyisigodlo sokuhlala komholi wokuqala ongokomoya waseMongolia ogama lakhe linguZanabazar noma uJebtsundamba Khutuktu ngonyaka we-1649. Lo nyaka manje uthathwa njengosuku lokuqala kwenhloko-dolobha yaseMongolia, i-Ulaanbaatar. Lo muzi waqala wabizwa nge-Ikh Khuree, ngokwezwi nezwi okusho ukuthi "umbuthano omkhulu" njengoba idolobha lalakhiwe. Ngemuva kokushintsha izindawo ezingxenyeni esemaphakathi neMongolia amahlandla angaphezu kuka-20, yahlala endaweni yayo yamanje ngonyaka ka-1778.
Ubuningi bokwakhiwa kwesimanje kwe-Ulaanbaatar kwaqala ukwakheka ngekhulu lama-20 ngethonya elivela ekwakhiweni kwezakhiwo zaseRussia. Usuku lwanamuhla lwe-UB lubonisa ukuxubana kwezakhiwo zaseSoviet, izindawo zokuhlala, izindlu zezindela ezingamaBuddha nokuphakama okukhulu kwikhulu lama-21. Phakathi kwamathempeli amaBuddha, okuphawuleka kakhulu yiGandan Tegchinlen Monastery, i-Choijin Lama Temple neMogd Khan Winter Palace Museum.
Abahambi abazinika isikhathi sokuhlola idolobha bazothola abantu abanomoya wokungenisa izihambi nabanenhliziyo efudumele. Inani labantu bomuzi lihlukaniswe izingxenye ezimbili ezinkulu. Enye ingxenye yabantu ihlala kumakhondomu asenkabeni yedolobha ngenkathi iningi labantu lihlala endaweni ebizwa ngokuthi yizifunda. Lezi zifunda, ngokwesiko okuyikhaya lezisebenzi eziningi zedolobha eziluhlaza okwesibhakabhaka nezabamhlophe, kamuva nje zaba yikhaya labaphambukeli abaningi abasuka kwamanye amazwe abake baba kuleli dolobha ukuzothola umsebenzi ngemuva kokuba ebusika obunzima bebulale imfuyo yabo.
Uxolo i-Peace Avenue (Enkh Taivny Örgön Chölöö) umgwaqo omkhulu futhi usuka empumalanga uye entshonalanga phakathi nendawo. Kuyindlela enkulu yokuthenga futhi izindawo zokudlela eziningi zitholakala eceleni kwaso. Umgwaqo ubuye udlule ngasemaphethelweni aseningizimu esigcawini esimaphakathi, iChinggis Square. Izikhungo Zolwazi Lwezokuvakasha zitholakala esitezi sokuqala se-Ulaanbaatar Bank Small Ring # 15 naseSeoul Street.
Yize amazinga okushisa ehlobo eba ngaphezu kwama-30 ° C, leli dolobha liyathuthumela kumazinga okushisa angaphansi kwe-zero izinyanga ezinhlanu zonyaka, kuthi ngoJanuwari nangoFebhuwari kube yizona izinyanga ezibandayo kakhulu ezihamba ngokushisa phakathi kuka-15 ° C kuye ku-40 ° C.
I-Ulaanbaatar yidolobha elikhulu kunayo yonke iMongolia. Ngo-1956, yayine-14.4% yabantu baseMongolia. Kusukela ngonyaka ka-2012, cishe ama-45.8% wabantu baseMongolia babehlala enhlokodolobha. Inesilinganiso sokusondelana kwe-272 / km2. Isifunda saseGer esisedolobheni lase-Ulaanbaatar besilokhu sikhula ngenxa yezinga lemali engenayo yemindeni esuka ezindaweni zasemakhaya iya edolobheni kanye nomndeni osanda kusungulwa, kanye nokuntuleka kwezindlu ezixhumene nokwakhiwa okuyisisekelo phakathi nendawo. Ngokusho kwemininingwane yezibalo, ama-47.2% wabantu base-Ulaanbaatar azalwe futhi akhulela kuleli dolobha ngaphandle kokuhamba nokuhlala kwenye indawo, okukhombisa ukuthi cishe u-50% wale enye ingxenye uthuthele kuleli dolobha ngemuva kuka-1990. uhlala ezifundeni zezindlu futhi osele angama-40% uhlala ezifundeni ezingama-ger.
Idolobha lase-Ulaanbaatar liyisizinda seMongolia yezepolitiki, yezomnotho, yomphakathi namasiko. Cishe i-45% yesibalo sabantu kanye nama-65% ezinkampani eziphelele e-Ulaanbaatar. Ngakho-ke, iningi lediphozithi nemali mboleko enikezwe abantu nezinkampani, izimoto nodokotela basedolobheni lase-Ulaanbaatar. Indima ye-Ulaanbaatar kwezomnotho waseMongolia inkulu kakhulu njengoba ezempilo ezihamba phambili ezweni, ezemfundo, ukukhiqiza kanye nezimali zigxile edolobheni. I-88.5% yamanyuvesi aphelele eMongolia ayithola edolobheni lase-Ulaanbaatar kanye nama-95.3% abafundi bebanga lesifundo sezwe nabo edolobheni. Ngakho-ke, leli dolobha liyisizinda semisebenzi yezenhlalo, yezomnotho, yezokuphatha kanye neyamasiko.
Njengamanje, isikhumulo sezindiza okuwukuphela kwaso abafika kwamanye amazwe singesikhumulo sezindiza iChinggis Khaan International Airport, esisendaweni eyi-18 km eningizimu-ntshonalanga yedolobha lase-Ulaanbaatar. Phambilini ibibizwa nge- “Buyant Ukhaa”, okuyigama legquma elakhiwe ngalo. Isikhumulo sezindiza sakhiwa kabusha ngo-1986, kanti ukuthunyelwa kwabantu, amasiko asemthethweni kanye nokulethwa kwezimpahla kusebenza kahle. Isikhungo sendiza yokuhamba sisanda kungezwa.
Yini okufanele uyenze e-Ulaanbaatar
Kunezinto eziningi okufanele zenziwe i-UB kusuka ekuhlolweni kwezigodlo zezindela naseminyuziyamu ukubuka, ukudansa nokuhamba ngezinyawo emapaki ayo.
Ithiyetha kanye Nokwenza Ubuciko
I-UB ibamba uluhlu oluningi lwemidlalo yasekhaya neyakwamanye amazwe nokwenza kwayo ngesikhathi sokuwa kwayo, ubusika kanye nezikhathi zentwasahlobo. Ukuhlala uhleliwe kumashejuli nemibukiso etholakalayo, ungaba nokuzijabulisa okujabulisa kakhulu edolobheni. Abadlala umhlabeleli be-rock kanye nabaphumelelayo baseMongolia nabo baba nesiteji sokudlala kwabo ezindaweni ezibalulekile zedolobha ngalesi sikhathi. Imininingwane ngeshejuli yabo ingatholakala ngokuxhumana namahhovisi okuthengisa wezindawo ezilandelayo. Ungasebenzisa futhi ishejuli le-Easyticket.mn nokubhuka kwamathikithi okuningi kwalokhu kwenze.
IBlackbox Theatre iMongolia etholakala engxenyeni esenyakatho nentshonalanga yedolobha ibamba imidlalo ejwayelekile ye-mono, i-jazz nabanye abaculi abavela ekhaya nakwamanye amazwe.
I-Theatre Theatre kuChinggis Avenue kulapho kudlalwa khona imidlalo egcwele kanye nezindawo zemidlalo yezizwe nezindawo zemidanso. Imininingwane emayelana nemibukiso ezayo ingatholakala ku-http: //www.drama.mn.
I-Opera House eChinggis Khan Square ibamba ukuqoqwa okucebile kwama-ballets aseMongolia nawamazwe omhlaba jikelele. Iwebhusayithi: http://www.opera-ballet.mn.
ICity Cultural Center eChinggis Khan Square ibamba imibukiso ehlukahlukene, amahlaya nemibukiso yemfashini.
Ulaanbaatar Philharmonic e-Opera House wenza imisebenzi ehlukahlukene yamanye amazwe unyaka wonke.
Kunama-cinema amaningi wesimanje anikezela ngama-movie wakamuva we-blockbuster. Kuya ngakuluphi uhlangothi lomuzi okulo. Ungabheka i-movie yakho oyithandayo kwenye yamabhayisikobho aseduze. Iningi lazo lifakwe ukuhlolwa kwe-3D namagumbi we-VIP amaqembu amaqembu azimele.
I-Urgoo Cinema itholakala endaweni yesithathu yokuthenga yezitolo enkulukazi, entshonalanga neGandan Monastery.
ITengis Cinema itholakala eFrance Square, enyakatho nesitolo soMnyango Wezwe
IGegeenten Cinema itholakala emnyuziyamu weBogd Khan Winter Palace.
I-Hunnu Mall Entertainment i-cinema etholakala ngaphakathi kweHunnu Mall esemgwaqweni omkhulu oya esikhumulweni sezindiza iChinggis Khan.
Iya eNaadam - umkhosi omkhulu futhi odume kunazo zonke eMongolia, oqukethe imincintiswano emidlalweni emithathu yendabuko yaseMongolia yokulwa, umjaho wamahhashi kanye nomcibisheli. Umkhosi ungumcimbi waminyaka yonke futhi uqalwa ngoJulayi 10th kuya ku-12.
Indabuko yezingubo zendabuko. NgoJulayi 13 njalo ngonyaka, umkhosi wasehlobo waseMongolia ehlobo, kuhlalwa ubuhlanga eChinggis Khan Square. Abantu abavela ezizweni ezahlukahlukene bagqoka izingubo zabo ezikhethekile, okwenza kube ngumbukwane onemibala yokubuka.
Hike endaweni yeBogd Khaan Uul Evikelwe Ngokuqinile ezindaweni ezisezintabeni eningizimu ye-UB, South yeZaisan Memorial (ENingizimu yeSikhumbuzo seZaisan.
Bheka uMakethe waseNarantuul (AKA Black): uyindawo ethokozisayo futhi ungathola amadili amahle. Bathengisa izilwane ezifuywayo, izikhumbuzo, izindwangu, izicathulo, amasokisi, inyama, izithelo nokunye. Abanye abantu bathi kuyingozi kodwa ngaphandle kwamaphakethe ambalwa (njengakuzo zonke izimakethe ezinkulu) kuphephile impela.
ISky Resort Resort, (eyi-13 km ukusuka enkabeni yedolobha, iya eningizimu eZaisan, bese isempumalanga ngomfula, idlule endaweni ehlala uMongameli. 8am - 11pm. Ukushushuluza eweni, ukuhamba ngeqhwa, ukukhweza, ukuqasha imishini, iski / isikebhe seqhwa, indawo yokudlela yamahhala. kusuka eDrama Center (eduze kweGrand Khaan Irish Pub) ngezimpelasonto 8, 8:30, 10, 11, 12, 14, 17:30, 18, 19:30; phakathi nesonto 8:30, 12, 17, 18, 19 Hlola ishedyuli yokuqinisekisa izikhathi zebhasi.
I-Mountain Biking - Amabhasi angaqashwa edolobheni uma ungalethanga okwakho. Ngena emagqumeni ubheke eningizimu yedolobha (eningizimu yezitolo zezithuthuthu) ukuthola imizila emikhulu nokubukwa okuhle kwedolobha.
I-UB inezitolo eziningi zezikhumbuzo ezihlose ukuvakasha kwaseKorea / Japan kanye naseYurophu / America. Ngenkathi ikhwalithi yezimpahla iyehluka, intengo ivame ukuba phezulu ezitolo zasedolobheni kepha ngaphandle, ungathola izinkokhelo ezinhle. Amanani amaningi asezingeni lawo uqobo futhi i-haggling iyadangala. Uzothola nje isaphulelo sika-10-15%.
Izambatho zomdabu, amabhuzu nezigqoko, izingubo zokugqoka zemali, ubucwebe, izihlalo zobambo zesikhumba, izihlibhi ezincanyana, umnsalo nemicibisholo yemidwebo.
I-Peace Avenue nendawo ye-Circus yizindawo eziphambili zokuthenga.
Iphansi lesi-6 lesitolo soMnyango Wezwe linengxenye enemidwebo yesikhumbuzo, kepha amanani aphakeme kunakwezinye izitolo ezincane.
IMakethe yaseNarantuul (AKA Black), eyaziwa ngabantu bendawo nje ngokuthi i-zach (зах), indawo yokuguqula izingubo ezishibhile, amathoyizi, izinkemba noma izikhonkwane zeSoviet zokusakaza amanga. Thatha imali encane kuphela kuwe ngebhande lemali noma ephaketheni lejazi elingaphakathi bese ushiya konke okuyigugu endaweni yakho yokuhlala, njengoba amaphakethe okuvamile ejwayelekile lapha. Yibanga lemizuzu eyishumi noma ukuhamba ngetekisi ukusuka enkabeni yedolobha. Ungalindeli imakethe yezivakashi noma. Lokhu imakethe enkulu evulekile yendawo lapho abantu bendawo bethenga izingubo. Kunzima ukuthola izinto ezizithandayo kubavakashi. I-9 AM-7PM WM, ivaliwe ngoLwesibili.
IBar Food Market, (Amakhulu ambalwa kuphela amamitha empumalanga yesitimela sesitimela ngasohlangothini olufanayo lomgwaqo). Le makethe iyindawo eshibhile kunazo zonke edolobheni ukuthenga izimpahla ezomile (ilayisi, i-pasta, ukudla okusemathinini), imifino emisha, izithelo ezintsha nenyama kanye nezinye izinto eziningi zokudla. Abathengisi bonke balungile futhi bakhokhisa amanani ajwayelekile. Inyama nokukhiqizwa kungaphakathi kwesakhiwo esingafakwanga uphawu ongeke ulindele ukuba kube yimakethe. Ngaphandle kukhona isixha sezitsha zokuhambisa lapho okusanhlamvu nokunye okuthengiswayo kungathengiswa.
Imakethe yaseDalai Eej, (entshonalanga nesakhiwo se-circus). Imakethe inezinhlobonhlobo eziningi zasentshonalanga kanye nokudla kwaseJapan, Korea naseChinese kanye nezinongo ezahlukahlukene. I-UB ayinayo imakethe yezinhlanzi kodwa ingxenye encane ekhoneni, ithengise izinhlanzi zamanzi ahlukahlukene ahlukahlukene kufaka phakathi i-graylings kanye ne-perch. Izinto eziyigugu kakhulu.
Imakethe yeBayanzurkh, (E-empumalanga engaphandle, eningizimu ye-Indoor Wrestling Palace). Noma kungekho zinhlanzi ezikhona lapha, inyama nezinye izinto eziyisisekelo zokudla kuyabiza kakhulu
Kunezitolo eziningi ezinhle zokuthola izincwadi edolobheni. Isitolo sezincwadi esitezi esingu-6 eSitolo soMnyango Sombuso singabhekelwa ezinye izincwadi. Isitolo sencwadi sangaphakathi, esisemuva kwehhotela i-Ulaanbaatar nalo linekona. I-Az Khur, isitolo esikhulu sezincwadi esivulwe kungekudala, inesinye samaqoqo amahle kakhulu ezincwadi zesiNgisi. Lesi sitolo sitholakala esitezi sokuqala seMunkhiin Useg ukushicilela indlu, ebhekene neMongolia Railway History Museum.
Librairie Papillon. Uma ufuna ukuthola izincwadi ezisezingeni eliphakeme kakhulu mayelana neMongolia noma ulimi lwaseMongolia ezilimini zase-Europe (isiFulentshi nesiNgisi ikakhulukazi), le ndawo inokhetho olukhulu kakhulu. Akhiwe e-University Ave., esedlule nje isakhiwo esikhulu seMongolia National University. Umkhathi muhle kakhulu, futhi ucishe ufane nokuthatha ikhefu elincane usuka eMongolia ungene kuFrance. Futhi banokhetho olukhulu lwama-Classics ezilimi zase-Europe uma ungathanda ukufunda izinto zohambo lwakho.
Umbono wakudala wokuthi "akekho ohambela eMongolia uyothenga ukudla" ungashintsha ngokushesha njengoba izindawo zokudla ezinhle kakhulu ezivulekile e-Ulaanbaatar, zinikeza uhla olwedliwayo lwezinto ezidliwayo zaseNtshonalanga, e-Asia naseMongolia. Ungathola i-pizza enengqondo ngokuphelele ngo- $ 3, ngisho nobusuku ngaphandle kwekhefi laseFrance elifanele akufanele lidlule i- $ 20. Cabanga ukuchitha ukudla okumbalwa lapha, ikakhulukazi uma uzohamba uhambo olude oluya ezweni. Kunzima ukuza imifino emisha, ikakhulukazi ebusika. AmaKorea (solongos khoolnee gazar) kanye nezindawo zokudlela zamaShayina zibusa edolobheni. Njengoba izindawo zokudlela zase-Eshiya eMelika zivame ukuvumelanisa imenyu yazo nasolwandle lwaseMelika, ngakho e-Ulaanbaatar ama-restares ase-East Asia enza imenyu yawo kululimi lwe-Central Asia (okusho inyama ethe xaxa!).
Uzothola izindawo zokudlela eziningi cishe zokukholisa ongakuthola noma kuphi emhlabeni. Uzoqaphela ngokushesha ukuthi zombili izindawo zokudlela nezindawo zekhofi (kufaka phakathi izindlu zangasese) zihlanzeka ngobukhulu obuvame ukwedlula noma yikuphi ezwekazini. Kwabaningi lokho kuyamangaza kumnandi.
Ukudla kwasekuseni kwenziwa okusha ngakho-ke lindela ukujabulela ukudla lapha.
Kukhona nokungcola okuncane kakhulu emigwaqweni futhi amanzi kampompi aphephile ngezinhloso zokuthuthwa kwendle, ngisho nokuxubha amazinyo akho. Kucace ngokuphelele futhi ngaphandle kwamakha noma ukunambitheka.
Ukuphila kobusuku e-Ulaanbaatar kuyamangaza ngokumangazayo kepha kungcono kakhulu ngaphandle kokuhlangenwe nakho wedwa - zama ukuthola indawo ukuze ikujoyine. Iningi lama-nightclub lidlala umculo weTrance, Techno, Electronic and House, amaklabhu ambalwa adlala umculo we-hip-hop. Amakilabhu amancane esifundeni sesi-3 nasesigodini saseSansar ezincane agwenywa kangcono. Qiniseka ukuthi uxolisa uma ushaya umuntu noma unyathela izinyawo zakhe ngengozi, ngoba abanye abantu baseMongolia bangacasulwa yiyo. Ubhiya emakilabhini ubiza cishe i-₮ 3500 (ngaphansi kwama- $ 2), ezinye iziphuzo ezinjenge-vodka zincike ekulinganisweni, isibonelo i-Vodka eyi-100 g ibiza cishe ₮ 4500 ($ 2.25) Impilo yeklabhu isebenza kakhulu ngoLwesithathu, ngoLwesihlanu nangoMgqibelo. NgoLwesihlanu, kunzima kakhulu ukuthola isihlalo ekilabhini. Ngokomthetho wombuso, onke amaklabhu nama-pub (imigoqo) kufanele kuvalwe ngemuva kwamabili, kepha amanye amakilabhu agijima kuze kube ngu-4: 00 AM. Ngosuku lokuqala lwenyanga ngeke uthenge noma yiluphi utshwala, kungaba buye esitolo noma kubha. Ungalokothi uhambe wedwa ebumnyameni, ikakhulukazi ngoLwesihlanu. Futhi ungalokothi uhambe wedwa lapho udakiwe, noma ungaboshwa bese ugcina esethangini elidakiwe, hhayi indawo emnandi ukuba lapho.
I-Wi-Fi - Izimenywa eziningi, amahhotela, amathofi, izitolo zekhofi, izindawo zokudlela kanye nama-pubs ane-Wi-Fi yamahhala. Uma usendaweni yedolobha, funa ukumboza mahhala i-Wi-Fi ngaphansi kwegama lezokuvakasha
Amakhekhe e-inthanethi - angaba inketho enhle uma usendaweni engaphandle ebiza cishe ₮ 400-800 ngehora.
Izinga lobugebengu e-Ulaanbaatar seliphezulu kakhulu uma liqhathaniswa namadolobha amaningi ase-Asia. Ukugudlwa kwamathanga nokudlanga ngobudlova kuyingozi enkulu enhlokodolobha kunezindawo zasemakhaya ngakho-ke kungakuhle ukugweme ukuhamba wedwa sekumnyama. Ukukhanyisa emigwaqweni akunakwethenjwa futhi izivakashi ngezinye izikhathi zizothola izidakwa nezinja ezidukayo. Izindawo lapho ukuthathwa kakhulu khona kuvame kakhulu kungamabhasi nemakethe yaseNarantuul (imakethe ye-alias Black), ikakhulukazi ukungena kwayo. Ibhasi limisa eduze kwezitolo zoMnyango Wezwe liyindawo ezishisayo zalo msebenzi. Uma uhlaselwe noma uthathe ipokhethi, sicela uzinikeze isikhathi sokwenza isiteshi esiteshini samaphoyisa esifunda futhi wazise inxusa lakho uma unaso.
Ngeshwa, i-xenophobia idlangile, futhi udlame olubhekiswe kwabakwamanye amazwe lwenzeka kaningi. Udlame luyingxenye yempilo yansuku zonke eMongolia futhi ikakhulukazi enhlokodolobha amazinga okulwa nobugebengu aphakathi kwezindawo eziphakeme kakhulu e-Asia. I-Alcoholism iyinkinga enkulu yezenhlalo neMongolia. Ungavumi noma usondele kunoma iyiphi indoda yaseMongolia ngaphansi kwethonya lotshwala. Cishe bonke abantu bakwamanye amazwe abaya emabha / amakilabhu ebusuku babika ukuhlaselwa kanye nolaka olujwayelekile.
Ukuhamba ebusuku ndawonye usenkingeni akufanele kube kukhathazeke kakhulu; akuyona eyabantu bendawo. Kepha namathela ezindaweni lapho ungabona khona izindawo eziningi (ikakhulukazi abesifazane). Ukuphuma ngamabha sekwephuze kakhulu ebusuku kuyingozi encane uma uwedwa; zama ukuba nabesilisa abaningana eqenjini lakho.
Kukhona isitimela esivela e-Ulaanbaatar futhi sisuka siye Moscow kabili ngesonto, kuthatha amahora angama-94 ukwenza lolu hambo. Kuhamba esinye isitimela masonto onke Beijing eMoscow, kudlula e-Ulaanbaatar. Kunezitimela ezimbili njalo ngeviki ezisuka e-Ulaanbaatar nokuphetha eBeijing, nesitimela esithe xaxa esontweni lonke esidlula e-Ulaanbaatar sisuka eMoscow siya enhlokodolobha yaseChina. Izitimela zansuku zonke ziya e-Irkutsk Russia, EHohhot e-Inner Mongolia nase-Erlian, ngaphesheya komngcele waseChina, kusuka lapho kunokuxhunyaniswa khona ezinye izitimela namabhasi.